Iifonti zasimahla ezingama-25 ezigqibeleleyo kuzo zonke iintlobo zabaYili | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iifonti zamahala ezingama-25 ezilungele zonke iintlobo zabaqulunqi
Iifonti zeTypographic azisoze zanele esinokufikelela kuyo ukuze sibe nenerekhodi elungileyo esezandleni zethu kwaye ngenxa yoko siyifumanise kubathengi abacela iinkonzo zethu zobungcali. Uthungelwano lwenethiwekhi lubonelela ngoluhlu olufanelekileyo lwezixhobo esinokufikelela kuzo ukugqiba imisebenzi yazo zonke iintlobo.
Ngeli xesha sikuzisa Iifonti zamahala ezingama-25 ezilungele zonke iintlobo zabaqulunqi Kwaye banokuba yinxalenye yoluhlu ekufuneka ukwazi ukulugqithisa ukusuka kolunye uhlobo lomthengi ukuya kolunye ngaphandle kokuqaphela ubuchwephesha esiya kuhlala siyiphatha njengeflegi. Siya kunye neminye imithombo ekhoyo ngoku eya kubeka icing kwikhekhe emsebenzini oza kwenziwa.
1 Umboniso wokudlala
4 Isicatshulwa esibomvu
10 Sula sans
12 Punk entle
18 IGangsta yoqobo
19 Vuthela ibrashi
20 Uhlobo lweTag
23 Ukusuka eRio
25 Mahala eBaskerville
Enye yeefonti zakudala ezinokuthi kudlula ngokugqibeleleyo ngenkulungwane ye-XNUMX. Uphuhliso lwayo lungumthombo ovulekileyo ukuze sibe nohlaziyo olwahlukileyo ngokuhamba kwexesha.
Ifonti yeserif yangoku iphefumlelwe nge-calligraphy ukuze sikwazi ukuyisebenzisa kwiibhloko zeemixholo ezahlukeneyo apho zinokuba zilunge kakhulu. Ngokobuchwephesha, yenzelwe izikrini kwaye isebenza kakuhle ekuprintweni.
Ifonti yejometri yesal-serif efana nale ingentla Uvana kakhulu nescreen njengokushicilela. Ipapashwe kulawulo lweeFonti zikaGoogle njengesimahla. Inobunzima obahlukileyo njengokwesiqhelo, bukekela, ngokugqamile nangaphezulu.
Enye ifonti yasimahla evela kwiifonti zikaGoogle oko kukuthi kugxilwe kwimveliso yoncwadi xa uqokelela imithombo yolwazi ngamanye amaxesha. Yenye yeefonti eziba yintandokazi yoyilo ngokugqitywa kwayo okuhle kunye nobuhle.
Uhlobo lohlobo lweserif oluphefumlelwe Ilifa ledayimane. Isandla esitsalwe nguChristian Thalmann, isetyenziswa ngokubanzi kubungakanani beentloko ezinkulu, zombini kwiscreen nakwiprinta. Ikwanomgangatho wokuba ifundeke ngokugqibeleleyo ngobukhulu obuncinci.
Imithombo esemgangathweni esiyiphatha kule post ukudibana nayo UFenix ​​kunye necalligraphy yakhe. Igqibelele kwiscreen kunye neetekisi ezinde, ubukhulu bayo bafuna ukufumana isithuba sokuphakama nobubanzi.
Olunye uhlobo lwasimahla kunye nolwahlukeneyo lweserif font. Izitayile ezine zizalisa olu hlobo lochwethezo ngenjongo yokubeka izihloko kunye neetekisi ezivelisa imvakalelo eguqukayo kufundo.
Uhlobo lohlobo lwe-serif yenye yezona zidumileyo kwiifonti zikaGoogle. Inexabiso le ineSlabo 27px kunye neSlabo 13px ukuze kubungakanani bubonakale ngokugqibeleleyo kulo naluphi na uhlobo lwaphakathi. Omnye wemithombo yefashoni yangoku esingenakuphulukana nayo.
Umthombo esinokuwuxabisa njenge Uhlobo olubi kakhulu lwe-Omnibus kwaye iza ngamatye amane ahlukeneyo: icacile, iqhelekile, inesibindi kwaye imnyama, kunye neetalikhi zayo. Ifonti entle esinokuvelisa ngayo iibhodi eziphambili kunye neempawu eziphambili ngeChivo Mnyama.
Umthombo oguqukayo uyile yi-Intel yokufundeka kwescreen. Kukwalungele ukuprinta kunye nokusetyenziswa kwewebhu. Ifonti yasimahla emele ubukhulu bayo kunye noyilo lwayo.
Ifonti evela kwiifonti zikaGoogle esekwe kwigraphigraphy kwaye inokusetyenziselwa iintloko kunye namaqhezu amancinci emihlathi. Lubonakala ngoonobumba besiLatin nabesiHebhere.
Uhlobo olumnandi kunye nesimahla lokugqibelela kweminye imisebenzi ethile kubuhle bayo. Lakhe isibindi kukuba "mncinci" kwaye unelo thintelo lanamhlanje kwimisebenzi ethile.
Ubushushu ukusuka Izinto ezingaqhelekanga, sineeParalines njengomthombo oqokelela inxenye yomoya yamashumi asibhozo. Ukufezekisa ukuyifaka kwinto ekhoyo yangoku kwaye isimahla kusetyenziso lwentengiso okanye lwabucala.
Abalinganiswa abangama-95 ezenziwe ngezandla ukuyinika intsingiselo eyodwa. Ukuba sikhangela into yobuqu kwaye sisondele, olu hlobo lochwethezo lulungile ukuba luyithathe simahla kwaye siyisebenzisele zombini into ethengisayo kunye neyakho.
Ukuba senza uhlobo oluthile lobugcisa singathengisa nge-Etsy, Uluhlu lokudlala luyifonti ethile yeso sizathu kwaye iya kulungiswa ukuhombisa ii-cushion, iiggs kunye nokunye.
Ifonti eyenziwe ngesandla equka bonke oonobumba besiLatin. Ukugqibelela kuzo zonke iintlobo zemisebenzi inento yokwenza nokuhlola, ukhenketho kunye nokuhamba.
Logama zininzi iindevuKuya kubakho ii-hipsters kunye neefonti ezinje ngeBetty efanelekileyo kwiiwebhusayithi ezinento yokwenza nokhathalelo lobuqu, kule meko yehipster okanye iitatoo. Ifonti ephezulu yasimahla.
Le fonti inokwenza imbeko kubazobi abaninzi be tattoo kwaye ngokuqinisekileyo umthengi uya kuba nakho ukubuza. Ukuba nayo kwi-repertoire kunokuza ukuba uphume engxakini, kwaye ngakumbi ngoku.
Umthombo ikhululekile kwaye yanamhlanje ngemigca eqondiswe kakuhle evakalisa ubutsha kunye nolutsha. Oku kuthetha ukuba luhlobo lohlobo lokuchwetheza i-hip-hop kunye nenkcubeko yasezidolophini ehamba ngomgibe.
Kuyafana nohlobo lweTag, a ifonti ephefumlelweyo epholileyo kwaye oko kuphawuleka ngamandla ayo.
Ukusuka kweyona mithombo yoqobo ine Ukuchukumisa okukhethekileyo ngumnyama. Epheleleyo umbala, iya kubeka into ekhethekileyo kwiblogi okanye kwiwebhusayithi osebenza kuyo.
Umthombo wohlobo sans-serif emi ngaphandle kwimigca yayo ecacileyo. Ilungele iintloko, iiposta kunye neelogo, iJaapokki luhlobo olukhethekileyo lokuchwetheza ngokupheleleyo.
Como ukuba siye Brasil, lo mthombo ukusa kwinto emnandi kwaye ugcwele amandla. Enye yeefonti ezizodwa ezijonga into ekhethekileyo ukubonisa isicatshulwa.
Olunye uhlobo lovavanyo olusithathileyo Yenye into ngaphandle kwaleyo sele ikhankanyiwe ukuza kuthi ga ngoku. Ineepesos ezimbini zokuba ungafumana phi ungayithatha.
Siphetha ngo Uhlobo lochwethezo olukhulu olubizwa ngokuba yiLibre Baskerville kwaye ilungiselelwe i-16px. Ngokusekwe kwi-1941 Baskerville, isebenza kakuhle kwiscreen. Yiprojekhthi yomthombo ovulekileyo osebenzayo kwesihloko nakwimihlathi.
Os Sishiya ezi fonti zibalaseleyo kubayili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iifonti zamahala ezingama-25 ezilungele zonke iintlobo zabaqulunqi
Umdlalo wabalinganiswa beTrone kuhlobo lwe-GTA
I-30 simahla se-PSD mockups yoyilo lokuhlela